तितोपाटी3months ago
‘चित्त बुझ्दैन भने मेरो गीत हेर्नैपर्छ र सुन्नैपर्छ भन्ने छैन’
कुवेर गिरी-गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा यतिबेला फेरि विवादमा छन् । नयाँ गीत ‘बीच्च बीच्चमा ४ – ख्यास्स पुतली’का कारण उनी विवादमा तानिएका हुन् । तीज पर्वका लागि भनेर उनले सार्वजनिक गरेको उक्त गीतले कला, संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ । गीतकै कारण लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले उनलाई सार्वजनिक बाहिस्कारको निर्णयसमेत गरेको छ ।दुर्गेश भने प्रतिष्ठानले गरेको निर्णय पक्षपाती भएको बताउँछन् । उनले आफूमाथि अन्याय भएको तर्क गर्दै प्रतिष्ठान एउटा संस्थामात्र भएकाले अदालतको जस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए ।बेलाबखत विवादमा तानिँदै आएका गायक दुर्गेश थापासँग विवादकै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
तपाईंंको गीत विवादमा तानिएको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ?
– गीत बनाउँदा र सार्वजनिक गर्दा यो गीतका कारण यति ठुलो विवाद होला भनेर सोचेकै थिइनँ । मभन्दा अगाडिका अग्रजले ल्याएका कतिपय गीतसमेत यस्तै यस्तै छन् । ‘इन्द्रेणी’ लगायतका धेरै लोकदोहोरी कार्यक्रममा मेरोभन्दा पनि छाडा शब्द रहेका दोहोरी गीत प्रसारण हँुदै आएको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । कसैलाई त्यो थाहा छैन भने अहिले पनि ती कार्यक्रम युट्युवमा हेर्न सकिन्छ । मेरो गीतलाई लिएरमात्र विवाद झिक्नु पर्ने खास कारण केही देख्दिनँ ।
तपाईंको गीतलाई किन अश्लिल भनियो ?
– यसले अश्लिल अर्थ दिँदैन । गीतमा प्रयोग भएको ‘ख्यास्स’ शब्दमा धेरै आपत्ति रहेको पाएँ तर त्यो शब्द खाइस् भन्ने बुझाउन प्रयोग गरिएको हो । ‘चोक्टा खान आएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ भन्ने अर्थका लागि यो ‘ख्यास्स पुतली’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यसलाई प्रतिष्ठानका व्यक्तिहरुले ठुलै रुपमा लिनुभयो ।
तपाईंका गीत यस अगाडि पनि विवादमा परेका छन् नि, होइन र ?
– हो, केही विवादमा परेका थिए । मैले बुझ्न नसकेको कुरो पनि यही हो । विवाद अस्वाभाविक छन् । गत वर्ष मेरो गीत ‘बीच्च बीच्चमा–३’ विवादमा पर्‍यो । त्यो बेला म्युजिक भिडियोका कारण विवाद सिर्जना भएको थियो । भिडियोमा पुरुष कलाकार महिलाको गेटअपमा थिए । फिल्ममा एउटा पुरुष कलाकारले सारी लगाएर वा भनौँ महिलाको पोशाक लगाएर अभिनय गरेको हामीले धेरै पटक देखेका छौं । कतिपय टेलिभिजन कार्यक्रममा केटाहरु पनि महिलाको रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । त्यो कुरामा कसैको आपत्ति हुँदैन तर मैले त्यही कुरा गर्दा विवादमा तानिन्छ ।
दुर्गेशले विवाद हुने हिसावले नै गीत बनाउँछ भन्ने आरोप छ नि ?
– अहिलेसम्म त्यो हिसाबले मैले गीत बनाएको छैन । मेरो गीतमा विवाद निम्त्याइएका हुन् । चर्चा वा विवादका लागि मैले कुनै पनि मिडिया वा सार्वजनिक स्थानमा ‘कन्ट्रोभर्सी’ कुरा गरेको छु र ? अहिलेको विवाद लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले झिकेको हो । प्रतिष्ठान आफ्ना संस्थाभित्रका र नजिकका व्यक्तिका गीत नदेखेजस्तो गर्छ । बाहिरी मानिसका गीतमा भने विवाद निम्त्याउँछ ।
प्रतिष्ठानले तपाईंलाई संस्थागत बहिस्कार कै निर्णय गरेको छ त ?
– मैले सुनेँ, प्रतिष्ठानले मेरा विषयमा संस्थागत बहिस्कार गर्ने, मेला महोत्सवमा जान नदिने लगायतको निर्णय गरेको छ रे । एउटा मानिसको जीवनमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रतिष्ठानलाई छैन होला । प्रतिष्ठान भनेको घर, परिवार हो । उसले त सम्झाई, बुझाई गर्नुपर्‍यो । मलाई एक पटक पनि छलफलमा नराखी सिधै बहिस्कार गर्न मिल्दैन । मैले आफ्नो कुरो पनि राख्न पाउनुपर्छ ।
प्रतिष्ठानको सुझावलाई अटेर गरेर तपाईंले गीत ल्याएको भन्ने छ नि ?
– यो सबै झुट हो । म एकपटक स्टुडियोमा काममा थिएँ । सोही क्रममा शिव हमालजीसँग भेट भएको थियो । उहाँले सँगै बस्न अनुरोध गर्नुभयो । त्यसपछि ‘गीत भएन नि कान्छा’ भन्नुभयो । त्यो समय मैले ‘दाइ ! अरुलाई पनि रोक्नुस् । म पनि चेन्ज गर्छु’ भनेँ । मलाई ‘ख्यास्स’को ठाउँमा ‘फुस्स’ राख्न आपत्ति छैन भनेर उहाँलाई भनेको थिएँ । अग्रजले जे गर्नु भएको छ, मैले त्यही गरेँ भनेर बुझाएँ । हो, यो कुरो मैले अग्रजबाटै सिकेको हो ।
त्यसो भए तपाईंको गीत अब हट्दैन ?
– मैले अग्रजबाट जे सिकेँ, त्यो गरेँ । मलाई गीत हटाउन अहिले पनि आपत्ति छैन । त्योभन्दा पहिले मेरो अगाडि आएका अग्रजका यस्ता गीत सबै हट्नु पर्‍यो । त्यसो भएको खण्डमा म पनि गीत हटाउँछु । मैले पहिले पनि अग्रजको अनुरोधमा गीत हटाएको थिएँ ।
प्रतिष्ठानले गरेको बहिष्कारको निर्णयले तपाईंलाई केही फरक पर्दैन ?
– प्रतिष्ठानको बहिस्कार मेरो अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र हनन् हो । उसले यति ठुलो डिसिजन गर्न मिल्दैन । प्रतिष्ठान भनेको घर हो, अदालत होइन । म यो विषयमा भोलि जे पनि गर्न सक्छु । उहाँहरुले मलाई एक पटक पनि नसोधी, मसँग छलफलमा नबसी आफु खुसी निर्णय गर्न मिल्छ त ?
अर्काे कुरो, मलाई प्रतिष्ठानले दुर्गेश थापा बनाएको होइन । म आफ्नै संघर्षले अहिलेको अवस्थासम्म आएको हो । अहिलेको अवस्थासम्म आउन मैले धेरै संघर्ष गरेको छु । खाई नखाई दुःख गरेको छु । कतिपटक डान्सबारमा भोकै नाचेको छु । धेरै दुःखले अहिलेको दुर्गेश बनेको हो । नाम, दाम र काम मलाई प्रतिष्ठानले दिएको छैन । त्यसै उहाँहरुले मलाई बहिस्कार गर्न मिल्दैन । यो विषयमा पछि बोलौँला । एक पटक ‘टेबुल टक’ त पक्कै होला नि ।
राज्यले गीतसंगीतमा सेन्सर लगाउने निर्णय यदि गर्छ भने त्यसको कारण दुर्गेश नै हुन्छन् भनेर पनि भन्न थालिएको छ नि ?
– मे के भन्छु भने प्रतिष्ठानले प्रतिबन्ध वा रोक लगाउँछ भने सबैलाई लगाउनुपर्&zwj;यो । कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्न मिल्दैन । चलचित्रको जस्तो सेन्सर अहिले गीत संगीतमा पनि आवश्यक भएको छ । गीतसंगीत बाहिर आउनुपूर्व त्यसको गुणस्तर र प्रभावको जाँच गरियोस् । यसका लागि प्रतिष्ठानले जिम्मा लियोस् । उसले हेरेपछि त्यो सार्वजनिक गर्न योग्य छ भनेमात्र बाहिर ल्याउन दिइयोस् । यो नगरेसम्म रिलिज गर्न नपाइने नियम कानुन बनोस् । सबै यो नियममा बाँधिउन् भन्ने मेरो पनि धारणा हो । फिल्ममा सेन्सर हुन्छ, गीतमा पनि लगाऔँ । नियम कानुन भयो भने मानिस हेरेर फरक व्यवहार गर्न त मिल्दैन नि । एउटा संस्थाले सबैलाई समान रुपले हेर्छ ।
लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान एउटा घर हो, अदालत त होइन । प्रतिष्ठानले आफुलाई बोलाएर चित्त नबुझेका विषयमा पहिले मसँग ‘टेबुल टक’ गर्नुपर्‍यो । मेरो हकमा त्यो गरेको छैन । अर्काे कुरो, प्रतिष्ठानमा भएका मानिसले जे गर्दा पनि हुने ? उदाहरणका रुपमा प्रतिष्ठानकै सुवास केसीले ‘भुत्रो माया जाल’ भनेर निकाल्दा केही हँुदैन । गायक बद्री पंगेनीले ‘पिएन क्याम्पस आउ बस मायालु गरौँ टाइमपास’ (के कलेज टाइपास गर्न जाने हो र ?’ पशुपति शर्माको ‘सरले यता बढाउने हामी यता जुधाउने भन्ने गीत के हो ?’ ‘स्याउ ल्याइदिउ कि केरा’, ‘भोगटेले ठाउँमात्र ओगटे’ भन्ने गीत कुन प्रसङ्गमा के अर्थ लाग्ने गरेर प्रयोग भएका छन् ? यी त उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता कयौं गीत छन्, जसमा प्रतिष्ठान केही बोलेको छैन । खाली मेरो ‘ख्यास्स पुतली’ शब्दलाई नराम्रो देख्ने उहाँहरुको हेर्ने नजर खराब छ ।
‘ख्यास्स पुतली’ किन र केका लागि गीतमा राख्नुभयो त ?
– ‘ख्यास्स पुतली’ मेरो गाउँघरतिर बोलिने टिपिकल शब्द हो । जो कोहीले पनि यो शब्द त्यहाँ प्रयोग गदर्थे । गाउँतिर ‘ख्यास्स’ भन्नाले बल्ल खाइस् भन्ने बुझिन्छ । त्यही शब्द टिपेर मैले प्रयोग गरेको हो । त्यसले नराम्रो अर्थ लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रतिष्ठानले के र कसरी बुझ्यो, म भन्न सक्दिनँ ।
पैसा र चर्चाका लागि दुर्गेशले जानाजान यस्तो गीत बनाएको आरोप लगाइएको छ नि ?
– कसले कसरी बुझ्छ, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन । चित्त बुझ्दैन भने उहाँहरुले मेरो गीत हेर्न र सुन्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । युट्युव त्यस्तो प्लेटफर्म हो, जसमा मन लागे हेर्न मिल्छ, मन नलागे नहेर्न पनि मिल्छ । मेरा फ्यान, मेरो जमात नै त्यही किसिमको छ । मैले शिव परियारले गाउने जस्तो गीत गाएर कसैले सुन्दैन । मेरो गीत फरक हुन्छ । म फरक तरिकाले चल्ने पनि मानिस हुँ । मेरो गीतले लोकदोहोरीसँग कुनै सरोकार पनि राख्दैन । म लोकदोहोरीको मोडलमात्र हो, गायक पनि होइन । गायन विधा मेरो छुट्टै छ । फरक टेष्ट दिन सकिएन भने यो प्रतिस्पर्धामा अडियन्सले कसरी रुचाउँछ र ? एकै खालका गीत रुचाउने भए अग्रज पुराना गायकगायिका अहिले ओझेलमा किन पर्थे ?
गीतका कारण प्रहरीमा पनि पुग्नु भयो । हरेक पटक गीत किन विवाद हुन्छ भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ ?
– म लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आवद्धसमेत छैन । त्यो भएको कारणले ममाथि संस्थाका मानिसले हेपेका हुन्, हेप्न दिनुस् । म आफ्नो तवरले चल्ने मानिस हो । म मेरा फ्यानलाई आफ्नो हिसावले गीतमा टेष्ट दिन छोड्दिनँ । मेरा दुश्मन खुट्टा तान्ने र लडाउन खोज्ने पनि छन् । तिनीहरुले यो विवाद र झमेला निकालेका हुन् । यस्ता कुराले मलाई अगाडि बढ्न सघाउँछ भन्ने मेरो धारणा हो । प्रतिस्ठानमा भएका अग्रज कलाकारको हिसावमा म बच्चा हो । सम्झाएर यस्ता क्रियाकलाप रोक्न लगाउनुको साटो विवाद उहाँहरुले निम्त्याउनु भएको हो । संस्थाको पत्र म्यासेन्जरमार्फत संस्था बाहिरका मानिसले दिने, मसँग सल्लाह नगर्ने, मलाई सिध्याउन विभिन्न प्रपञ्च रच्ने । मैले पनि व्यक्तिगत हिसाबमा प्रतिष्ठानलाई सहयोग गरेको छु नि !
August 5, 2021 6:55 pm | अन्तर्वार्ता, ट्रेन्डिङ, पत्रपत्रिका बाट